Smart Posture Corrector, Back Brace, oche ndị dị fechaa - Hongzhu
Ngwaọrụ mkpokọ akwara nwa
Ikuku Akpukpo Akpata ikuku
Oche Onye Isi oche
ỌR AR ỌZỌ
Ngwaọrụ Cervical Neck Traction Device B01-1 Super Soft
Hemiplegic Walker Maka Onye Okenye
Corure Corrector J15
DeviB01 Cervical Neck Traction
Corure Corrector J09
Onye isi oche oche oche L-L0212B
Hemiplegic Walker Maka Childrenmụaka
Ulo Oru Matara A02
Deviis Cervical Neck Traction
hemiplegic walker for Adult3
Anyi bu ndi okacha emeputa nke ngwaahịa nlekọta nke onwe onye nke na-egwu ala n’ahịrị a ihe dị ka afọ iri, ngwaahịa anyị gụnyere ngwaọrụ ọnya nkwonkwo ụkwụ, ndị na-agbazi azụ, nkwado azụ, eriri ndị na-enye ọzụzụ, oche oche ụkwụ, rollator ije, crutches, wdg.
Anyị nwere mmadụ asatọ maka azụmaahịa mba ụwa, onye ndu na-ahụ maka azụmahịa ahụ nwere ahụmịhe azụmaahịa mba ụwa karịa afọ 18, mmadụ ise na-akpọ Bekee, 1 onye na-akpọ Spanish, otu onye na-akpọ German. Anyị niile nwere otu ebumnuche, na-eweta ngwaahịa dị elu, ọnụahịa asọmpi, na ọrụ ọkachamara.
Anyị ji obi ụtọ nabata ọbịbịa gị ma na-atụ anya iso gị rụ ọrụ n'oge na-adịghị anya.
G MỌ ỌZỌ >>
Otu leta maka ndị enyi anyị niile-dụọ ndụmọdụ ...
Ndị Enyi M hụrụ n'anya, ugbu a karịa n'oge ọ bụla, n'oge nkwado, ịkwado ibe anyị abụrụla ọrụ anyị. Anyị niile ga na-aga n’ihu na ntachi obi na nchekwube ebe anyị na-ejighị n’aka. Dị ka anyị na-agbasi mbọ ike iji chebe h ...
Ihe ohuru ohuru na-abata-ihe ndozi
Ndewo, onye ọ bụla, enwere otu ozi ọma maka anyị na gị, anyị zụlitere ụdị ọhụụ ọhụụ abụọ postal ziri ezi. Foto maka mbido gị dịka, ...
Otu esi ahọpụta onye na-agagharị hemiplegic
Dabere na ọnụ ọgụgụ, kwa afọ enwere 1.2-1.8 nde ndị ọrịa strok, ọnwụ 400000-800000 kwa afọ yana 86.5% nkwarụ. Dabere na ọnụ ọgụgụ ụfọdụ ndị ọkà mmụta si kwuo, n'etiti ndị ọrịa na-arịa ọrịa strok na-adị ndụ, ...
Ndewo, onye ọ bụla, enwere otu ozi ọma maka anyị na gị, anyị zụlitere ụzọ ọhụụ ọhụụ abụọ. Foto maka mbido gị dịka, ...
Ememe-imekọrịta na ụlọ ọrụ RUKANG…
Jiri obi ụtọ na-eme ihe nkwado maka ahụ ike Hongzhu na Rukang iji bịanye aka na nkwekọrịta ndị dị na oche ndị a na-anyagharị. Ndị isi otu abụọ a, Maazị Yang na Maazị Lv gawara ya ma kwe nkwa na ha ga-anwa ike ha iji kwado ndị…